Onesimo 15 ehektheleni endaweni: imibono kuphela esebenzayo. Onesimo endaweni suburban 15 ar
Kuhlala ekhatsi indlu yangasese ubulokhu uhlotshaniswa nge ezihlukahlukene izinqumo kwezezindlu kanye endaweni ezungezile. Abanikazi komhlaba 15 ehektheleni izimo zivuma hhayi kuphela libekwe ejwayelekile walakha, kodwa belibandla nabo bafanele kuhlomisa indawo yokuzilibazisa. Kuzoba afanele landscape design izakhi, ezifana amadamu, utshani zezimbali.
Sengqondo endaweni suburban 15 esingamahektare kuwumsebenzi wemfanelo njengoba izakhiwo uhlelo kumele uthobele yonke imithetho yokuphepha umlilo, kanye unayo i ukubukeka ekhangayo.
Izimo letitsintsa endaweni uhlelo
Uma ufuna ukwenza indawo yakho yomsebenzisi-friendly futhi emuhle, kubalulekile ukuba acabangele nemingcele ezibalulekile eziningana. Ingabe Zikhona Izimo Ezenza ezinomthelela uhlelo: impumuzo, ukuma, indawo ngokuhlobene eziyinhloko.
Distribution ingxenye 15 ar: Highlights
Lwezentuthuko iqala ephepheni usenze sakhanya ubukhulu element ngayinye futhi ingxenye wesifunda. Izibalo zenziwa ngezinga edingekayo. Lokhu kuyadingeka ukuze kuqalise ukusebenza obengeziwe umdwebo ekuphileni. Zonke amaphrojekthi uhlelo ingxenye 15 ar ndawo evamile ihlukaniswe yaba izingxenye ezintathu: Isakhiwo, zemifino kanye nokungcebeleka. indawo yabo efanele obulandela kwencazelo amaphuzu cardinal futhi izindawo insolation (ukukhanyisa welanga). On butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela ukubeka ingxenye ngayinye udinga ukutshela ngaphandle.
Ukuhlela izakhiwo endaweni
House, okugeza kanye egalaji zingcono ibekwe engxenyeni esenyakatho yendawo, njengoba ngeke siphazamise iyunifomu babasa engadini ehlobo. Windows zezakhiwo baye ukuya ngasempumalanga noma ngasentshonalanga. Ochwepheshe batusa egumbini ohlangothini lwasenyakatho. Bathi lokhu yokungabi ukukhanyisa kunoma iyiphi inkathi. Ohlangothini eningizimu endlini, ungakwazi ukuhlela Veranda yokutshala izithombo, ukukhanya okuningi uya e umusa wakhe.
Ukuze ugweme ngokweqile ukubopha izindawo kudingeka ucabange kusengaphambili ukuphakama futhi uhlobo ocingweni. kocingo Izithulu ezensimbi ukuvikela indawo ngothuli emgwaqweni, kodwa uyolahlekelwa ukukhanya kancane kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, i-lekushuca kocingo kukuvumela kahle fresh komoya, kodwa awukwazi ukufihla endlini emehlweni prying. Ngakho-ke, esimweni ngasinye, umbono ucingo kumele akhethwe ngamunye.
Sengqondo ingadi esishintshashintshayo
Imingcele engadini akudingeki babe imigqa ecacile. Le ndawo kungenzeka ziqale ukuhambahamba endlini nezihlahla amancane ekupheleni endaweni yokuphumula ngokwesivumelwano insimu izihlahla, ukudala umthunzi emnandi. I element wobunye esaba kufanele kube izindlela ezifanayo futhi isimiso sokunisela ngenkasa.
Khumbula ukuthi yonke isitshalo kukhona elikhulu ngenkasa Imodi, ukukhanyisa, amandla sikhiphe ukushisa. Ngesisekelo lezi idatha walala endaweni suburban 15 esingamahektare kumele uqale kusukela ohlangothini olusenyakatho yendlu, ngoba kukhona imibandela ezinhle nezihlahla umthunzi-ukubekezela, ezifana currants. On sesihlasela ingxenye eseningizimu ye isakhiwo izikhala eduze kocingo kufanelekile zokutshala raspberry. Lezi zitshalo izithelo kukhona zisetshenziswa, okungukuthi, e-ukuhlela yonyaka yensimu yase endaweni uyohlale njalo, ngokungafani kuya imibhede unxande.
Growing imifino has a lot of umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi kudingeka kucatshangelwe. I imibhede kumele ivikelwe noma enezihlahla izithelo imimoya enyakatho nasempumalanga. izitshalo Ephakeme kangcono kahle ngendlela yekutsi ungawakhi ithunzi eliphansi (isibonelo, u-anyanisi noma izaqathe).
Onesimo ukuzilibazisa endaweni
I eholidini zingafakwa Echibini elithile elincane yokufakelwa ngoba izinhlanzi Ornamental, senhliziyo futhi Gazebo. Uma-no-engadini ingxenye kuthatha isikhala okuncane, ikhambi ephelele kungaba ukwakha on ensimini wechibi khulula. ungakwazi uhlwanyele utshani amageyimu izingane yeselula.
Sengqondo izwe 15 esingamahektare uyobheka ivumelane ngaphezulu uma abanikazi Umenyiwe umklami landscape lo msebenzi. Kulokhu, yonke indawo enkulu iba yomkhakha owodwa, a division abukhali endaweni ngeke lubonakale.
Izitayela ingxenye uhlela 15 ar
isitayela ngamunye has izici zayo siqu, okuyinto thina sihlolisise.
Onesimo 15 ehektheleni site, sikimu kusakhiwa, kumelwe nakanjani acabangele sezwe. Ukuze ezisehlanzeni Kungcono ukukhetha isitayela njalo. It libhekene ukunemba ulayini izakhiwo, imibhede kanye nezinye ekutshaleni. a Ilungiselelo elinjalo nqubo ukonga futhi elula.
Zonke izingoma futhi izakhi landscape design, zidalwe kusayithi ngesitayela njalo, lesinesitfombe-sibuko maqondana eksisi efanayo. Lokhu kusebenza futhi amachibi kanye namachibi.
Ukusatshalaliswa izakhiwo kanye nokungcebeleka izindawo endaweni impumuzo lihlukile emathafeni amaphrojekthi. Sengqondo izwe 15 ar ngokufanele ku eyehlelayo noma amagquma, cishe uyophiwa i-eyenziwe isitayela landscape. Izimali ups bushelelezi nezimbi kungenziwa beat ngempumelelo besebenzisa imigqa lwalugobile.
Landscape isitayela kuhilela ukuqedwa ngokuphelele wesimethri nokunemba izakhi ifomu. Lapha ukwamukela ukuma okungajwayelekile, ucabangela nesimo sendawo. Ngokwesibonelo, bonke izigodi namagquma ngempela ngamafuphi angena iphrojekthi. izindlela okuqondile kule isitayela design akunjalo, kodwa iphuzu eliwusizo Ngenxa egoba zabo akufanele kube uyimbudane, kumnikazi yendlu Yayintininiza ngokushesha phakathi kwamabhilidi. izakhi okuhlobisa esakhiwe ngezinto zemvelo, bamukelekile. isakhiwo sesigaba 15 esingamahektare, esemgwaqweni ngezansi isithombe, nje sihlinzekela yonke imininingwane edingekayo.
Izimbali namatshe amagquma ngokuvamile aba okweqanda noma eduze kwalo akha. Amabhentshi kanye gazebos kangcono ukukhetha Retro noma ezensimbi. I element Ukuhlanganiswa amasango, amabhentshi kanye gazebos kungenziwa umdwebo izakhi zensimbi.
inhlanganisela Bold lemigqa iqonde futhi engonxantathu afanele ezindaweni imifanekiso ehlukene. isitayela ezixutshiwe kunikeza ithuba elikhulu nokuqalisa okuzikhulula umklami nabanikazi ekhaya.
Inhlanganisela izindlela ngqo nemibhede emazombezombe inikeza ukunyakaza esheshayo kungenzeka phakathi zone kanye ingxenye yesikhalazo zayo yobuhle kanyekanye.
Ngakho, kungenzeka ukuhlela ingxenye 15 ar kwenziwe kunoma yiziphi izitayela. Isimo main acabangele sendawo kanye esikuthandako yomnikazi.
Ikakhulukazi ezindaweni sihlela ukuma okungavamile
Ideal for the ingxenye kuthathwa umumo isikwele noma unxande. Ngo insimu enjalo kalula thola zonke izakhiwo kanye Orient ukuba ukhadinali. Sengqondo wamaqhuqhuva endaweni 15 esingamahektare, ngeke kube nzima. Kodwa ngokuvamile akanawo la mafomu. Kungaba oblong, esingunxantathu noma z-okwenyanga. Ngokukhethekile kufanele futhi unikwe esayithini eyehlelayo.
Amaphutha nokususwa yabo uma uhlela ingxenye elongate
Onesimo ar ingxenye 15 ngale ndlela uqonde yonke indawo, ingenye amaphutha ezivamile. Kusuka enjalo endaweni okufikela kuyo izingcingo ezingaphezu zibukeke elula futhi izivumelwano. Kungcono ukuba esikhundleni sako imigqa weJiyomethri kwi bushelelezi futhi usebenzise "abahlukanisi" ngesimo nezihlahla, nemengamo noma Hedges.
Ngesikhathi sasehlobo, ongaboni ukushintsha ukuma isikhala kuzosiza izimbali. Ohlangothini olude kufanele ibekwe izitshalo ngamapheshana amancane izimbali, futhi engxenyeni distal wesabelo ezinkulu Ukwakheka ukutshala ezinemibala egqamile. Yesilinganiso ukushintsha olinganise zensimu kuzosiza izihlahla. Ohlangothini kude kungcono ukutshala igabade emincane futhi umakhelwane wakhe - izitshalo ongaphakeme. Lapho zikhula, kuzodala umqondo kwesigaba sikwele.
umqondo kahle ukubeka izakhiwo kwisayithi ukubekwa i ijamo side ezingxenyeni ezimaphakathi distal yensimu. Ikhaya kanye nasezintweni okuhlalwa endaweni, kufanele akhiwe emngceleni proximal.
Izakhiwo kwesigaba uhlelo esingunxantathu
Lokhu ukuma okungavamile kuvamile. Triangle kungaba non-isosceles. The main isimo nokubekwa izakhiwo on ensimini, kulokhu nabuphi efanele kuze eziyinhloko.
Abaklami nabakhi belulekwa ukuba amphuzise uhlelo eningiliziwe ephepheni izikhathi eziningana. Okuwukuphela kwendlela yokuthola okungcono. abanikazi abaningi kwezingosi ezinjalo uthanda ukwakha indlu maphakathi izindlu - kanye uhlangothi, futhi ingadi yemifino kanye nokungcebeleka endaweni - okuzungeze izakhiwo. Into kuphela zonke Abaklami uyavuma, lokhu ukubekwa ekhoneni kude kwendawo zemithi yezithelo. Kungenxa yokuthi kuwo akudingeki ukunakekelwa njalo, futhi leli lungiselelo, bona ngeke lehle inani eliphansi komthunzi kwezinye izitshalo.
Ngesikhathi ekhoneni kude unxantathu ukuma kuchazwe zingase zingabafaneli okutshalwe izihlahla, ke kungcono ukuhlela emgodini umquba phambi ke nezihlahla ongaphakeme batshala noma chokeberry. Onesimo suburban endaweni 15 ar nge ilungiselelo elinjalo ivumela ukufihla ekubukweni ukubukeka ebukekayo izitshalo kuvuna.
Design isayithi emthambekeni: zoMthetho oyinhloko
Ochwepheshe ukwehlukana izindlu izwe amaqembu amabili: eyehlelayo 15 ° noma ngaphezulu. Ngu izigaba emaphandleni incike ubuchwepheshe ekwakhiweni kwezakhiwo. Nciphisa emthambekeni ukuthambekela kuzoba nomthelela ingxenye ngokwahlukana kuya zone wangenela nenhlangano izindonga esaziwa. Izinga ngalinye isikhala kuleli cala anganikwa isimiso sokuthutha indle. Ukunisela engadini ku eyehlelayo luyindida ngenxa omiswe okusheshayo kwenhlabathi. Lokhu kumele kubhekwe lapho ukuklama yesimiso sokunisela ngenkasa.
Ngakho, namuhla kukhona ezihlukahlukene izikimu suburban endaweni yokuhlela. Kuvele umklami abanolwazi angaphakamisa ezimbalwa ongakhetha ifomu endaweni ngayinye. Onesimo 15 ehektheleni ngesakhiwo kuwumsebenzi ezithakazelisayo futhi enesibopho.
Iminyango ngamapulangwe: emnyango futhi ingaphakathi
Yikuphi endlini kungcono: kusuka ibha noma ifreyimu? Uhlolojikelele, Luhlatiyo kanye nokubuyekeza
I-Lacing skates. Ukuchofoza okulungile kwe-hockey nama-skate wokubheka